उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई भने-दोहोरो कर तत्काल हटाइयोस् - Prawas Khabar
२६ साउन, काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले असंवैधानिक रुपमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमार्फत लागेका दोहोरो कर हटाउन माग गरेका छन् । जथाभावी कर लगाउँदा सर्वत्र त्रास फैलिएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीले प्रधानमन्त्री केहपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सांसदहरुले भने : प्रशासकीय अदालतको गठन र कार्यादेशबारे सोचौं
पूर्व प्रेमिकाको घरको दराजभित्र लुक्नुको अवस्थामा सलमान खान पक्राउ परेपछि…….
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा पनि डा. केसी विश्वस्त हुन सकेनन्